samedi, 28 mars 2020 22:49
France: Passage à l'heure d'été
Cette nuit samedi 28 mars au dimanche 29 mars à 2h du matin, il sera à 3h du matin.
Madagascar aura un décalage horaire de 1h au lieu de 2h actuellement.
Si Paris est à 3h du matin, Antananarivo sera à 4h du matin.
Vatican: Mpiasa enina voan’ny coronavirus
Enina amin’ireo mpiasa ao Vatican, foiben’ny finoana Katolika manerantany, no voamarina hatreto mitondra ny tsimokaretina coronavirus. Tranga vaovao ny roa amin’ireo, taorian’ny fitiliana niisa 170 natao.
Tsy voakasik’ity valanaretina ity kosa ny Papa François sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy.
Oussama Abad, tovolahy iray 23 taona, zanaka mpanao mofo (Boulangerie Abad) no hita faty tao an-tranony ao Aranta-Mahajanga androany.
Mampiahiahy ity tranga ity, hoy ny loharanom-baovao akaiky ny mpanao famotorana satria nisy olona iray trano amin’ilay tovolahy, nivoaka nisakafo. Tamin’ny fotoana niverenan’ireo olona ireo nisakafo dia i Oussama Abad efa maty ary nifatotra no novantanin’izy ireo tao an-trano.
Efa eo ampelan-tanan’ny mpitandro ny filaminana ny famotorana amin’izay hamantarana ny antony sy ny mety ho tompon’antoka amin’izao vono olona feno habibiana izao.
969 no maty omaly zoma 27 marsa tany Italia tamin'ilay valanaretina coronavirus.
Efa 9 134 no nodomandry amin'izao, ary 86 498 ireo tratran'ny tsimokaretina any an-toerana.
Firesahana mivantana tamin’ireo mpivarotra teny an-tsena Sabotsy no nataon’ny Governoran’ny Faritra Vakinankaratra Vyvato Rakotovao, ny Ben’ny tanàna Rasamimanana Honoré ary ireo Mpitandro ny filaminana androany ho fisorohana ny fidiran’ny tsimokaretina Coronavirus.
(Sary: Seraseran’ny Fiadidiana ny Faritra Vakinankaratra)
Ivontoerana hany tokana eto Madagasikara anaovana ny fitiliana ary nivoahan’ny antotanisa momba ity valanaretina coronavirus ity, nanomboka ny zoma 20 marsa 2020 ny Institut Pasteur de Madagascar etsy Avaradoha – Antananarivo.
Tonga nitsidika an’ity ivontoerana ity ny filoham-pirenena Andry Rajoelina io tolakandro io, nisaotra ny fahaizamanaon’ny mpiasa ao, ary koa nifampitafa tamin’ireo mpitantana ny amin’izay hifanampiana hanatsarana izao fiarahamiombon’antoka amin’ny fiatrehana ity valanaretina ity izao.
Maromaro ireo mpanakanto Malagasy nahavita namoron-kitra sahady mikasika ity valanaretina coronavirus, izay mahenika an’izao tontolo izao ity.
Anisan’izany ry Mr Sayda, Mijah, Rheg, Shayron… Efa heno amin’ny onjampeo samihafa eto an-drenivohitra ny hiran’izy ireo, ny sasany efa mizara an’izany amin’ny Youtube ihany koa.
Manao fanentanana ny tokony hitandremana noho ny mahazava-doza ity coronavirus ity ny ankamaroan’ireo hira mivoaka hatreto.